သိန်းတစ်​​သာင်းခွဲထီ​ပေါက်ပေမယ့် ကွမ်းယာဆက်ရောင်းမယ့်​ ဇနီးမောင်နှံ
June 1, 2019 Cele Love 0
သိန်းတစ်​​သာင်းခွဲထီ​ပေါက်ပေမယ့် ကွမ်းယာဆက်ရောင်းမယ့်​ ဇနီးမောင်နှံ ၄ ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း တစ်သောင်းခွဲ အောင်ဘာလေထီဆုကြီးကို မန္တလေးမြို့ မြရည်နန္ဒာရပ်ကွက် ဗ ၂၃ ထဲက ပွင့်သစ်ကွမ်းယာဆိုင် ပိုင်ရှင်ဇနီးမောင်နှံက ဆွတ်ခူးသွားပါတယ် …. ။မန္တလေးမြို့ မြရည်နန္ဒာရပ်ကွက် ဗ ၂၃ မှာ နေထိုင်တဲ့ ပွင့်သစ်ကွမ်းယာ ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ […]
တရက်တော့ မနက်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ထမင်းဟင်း ညနေ ကျောင်းဆင်းလို့ ထမင်းဗူးဆေးချိန် အရမ်းနံနေတာ မသင်္ကာလို့ ရေနွေးပူနဲ့ ပြုတ်လိုက်သောအခါ
တရက်တော့ မနက်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ထမင်းဟင်း ညနေ ကျောင်းဆင်းလို့ ထမင်းဗူးဆေးချိန် အရမ်းနံနေတာ မသင်္ကာလို့ ရေနွေးပူနဲ့ ပြုတ်လိုက်သောအခါ အတွေ့အကြုံလေးမျှဝေပါရစေရှင့် မေမေတို့ရေ … ကျောင်းဖွင့်ခါနီးပြီဆိုတော့ သားငယ်သမီးငယ်တို့ကျောင်းတက်ဖို့ လိုအပ်တာတွေ ဝယ်စုနေကြပြီပေါ့နှော်… ကလေးထမင်းဗူးဝယ်ရင် ပုံထဲက ဗူးမျိုးမဝယိမိပါစေနဲ့နှော်… မနှစ်က ကျမသမီးအတွက် frozen တဗူး hello […]
ပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့အခါ ဒိဋ္ဌဓမ္မ ဒီဘဝမှာပဲ အကျိုးပေးအောင် စံချိန်ကိုက်ရွတ်ဖတ်နည်း…
ပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့အခါ ဒိဋ္ဌဓမ္မ ဒီဘဝမှာပဲ အကျိုးပေးအောင် စံချိန်ကိုက်ရွတ်ဖတ်နည်း… ပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့အခါ ဒိဋ္ဌဓမ္မ ဒီဘဝမှာပဲ အကျိုးပေးအောင် စံချိန်ကိုက်ရွတ်ဖတ်နည်း (၄)နည်းရှိသည်။ ၄င်းတို့မှာ…… (၁)ခန္ဓာကိုယ် သန့်ရှင်းစေရမည်။ (၂)အချိန်မှန်မှန်ရွတ်ဖတ်ရမည်။ (၃)ပီပီသသ အသံကျယ်ကျယ်ရွတ်ဖတ်ရမည်။ (၄)ပြီးလျှင် အမျှဝေ မေတ္တာပွားရမည်။ အဓိပ္ပာယ်အကျယ်- (၁) ခန္ဓာကိုယ်သန့်ရှင်းစေရမည်။ ပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်လျှင် အနီးနားရှိ […]
နှစ် ခွဖြစ် လို့ ဖြတ်လိုက် ရတာတွေ ခုမှ နှမျော လိုက်တာ…
နှစ် ခွဖြစ် လို့ ဖြတ်လိုက် ရတာတွေ ခုမှ နှမျော လိုက်တာ… “ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သဘောအကျဆုံးက ဆံပင်ပဲ” ဆေးနည်းတစ်ခု လုပ်ကြည့်တာ ၂ ကြိမ်တည်းနဲ့ သိသာတယ် တကယ်ပါ …. ။ အစောက သိခဲ့ရင် နှစ်ခွဖြစ်လို့ဆိုပြီး ညှပ်ချခဲ့ရတဲ့ ဆံပင် တစ်ထွာကျော်ကို […]
သင့်ကို အသက် ( ၇ )နှစ်လောက်ပိုငယ်သွားစေမယ့် ဂျပန်ရိုးရာအနှိပ်လေ့ကျင့်ခန်း ( ၇ ) ခု…
သင့်ကို အသက် ( ၇ )နှစ်လောက်ပိုငယ်သွားစေမယ့် ဂျပန်ရိုးရာအနှိပ်လေ့ကျင့်ခန်း ( ၇ ) ခု… အသက်အရွယ်ရလာရင်မျက်နှာရဲ့အရေပြားကတွဲကျပါတယ်ဒါကမျက်နှာကကြွက်သားတွေအားနည်းလာတာသာမကပဲကိုလာဂျင်ဓာတ်လျော့ကျလာလို့လဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်ကြီးခြင်းရဲ့နောက်တချက်ကတော့ မျက်နှာကအရိုးတွေရွေ့ကုန်လို့ပါပဲ။ အကျိုးဆက်ကတော့မျက်နှာကေ ဝဝါးလာပြီးပါးနဲ့မေးစေ့တွေလျော့တွဲလာတာပါ။ဒါပေမယ့်ဂျပန်လူမျိုးဖြစ်တဲ့ချီယော့ဟယရှီကဒီပြဿနာကိုရှင်းဖို့အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မျက်နှာမှာရှိတဲ့သွေးတစ်ရှူးတွေလည်ပတ်ဖို့နဲ့ဦးခေါင်းခွံကအရိုးတွေပုံမှန်အတိုင်းရှိစေဖို့ကူညီမယ့်အထူးနှိပ်နည်းကိုသိခဲ့ပါတယ်။ထိုစနစ်ကိုခိုရုဂိလို့ခေါ်ပါတယ်။ Bright Sideကထိုနှိပ်နည်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ မျှဝေပေးဖို့စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့အတွက်ခေါင်းစဉ်ရဲ့အဆုံးမှာရှိတဲ့အပိုဆုလေးကိုအလွတ်မခံနဲ့နော် ….. ။ အရေးကြီးတဲ့မှတ်စု! ကြွက်သားတွေကနှစ်ကြာတာနဲ့အမျှလျော့လာပြီးအဆီတွေပြန့်နှံလာပါတယ်။ငယ်ရွယ်တုန်းမှာတော့အလွှာတခုတည်းဖြစ်အောင်အဆီတွေကပေါင်းသွားပေမယ့်အသက်ရလာရင်တော့တနေရာတည်းမှာစုပုံသွားပါတယ် …. ။သင်စမလုပ်ခင်မှာမှန်ကိုယူပြီးအနှိပ်ဆီလေးလိမ်းပါ။ အဲဒါကသင်လုပ်နေတာမှန်ရဲ့လားဆိုတာသိစေပြီးအပိုပွတ်တိုက်မှုတွေကိုရှောင်ပေးပါတယ်။ပြီးတော့သင့်အရေပြားကိုလဲသန့်စင်သင့်ပါတယ် …. […]
မိန်းကလေးတွေ ကိုယ့်ရည်းစားကိုယ် သည်းနေအောင် မချစ်ပြသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅)ချက်
မိန်းကလေးတွေ ကိုယ့်ရည်းစားကိုယ် သည်းနေအောင် မချစ်ပြသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅)ချက် မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူတစ်ပါးကို မလိမ်ညာဘဲ တကယ်အချစ်စစ်နဲ့ချစ်တာက အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လိုတာထက်ပိုပြီး ကိုယ်ချစ်နေတာကို သည်းသည်းလှုပ်မဖော်ပြသင့်ပါဘူး။ ဒီလိုမဖော်ပြသင့်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅) ချက်ကတော့ ဒီလိုပါ။ လူတိုင်းဒီလိုဖြစ်မယ်ရယ်လို့တော့ မဟုတ်ပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံး အရာတွေကို ဖော်ပြပေးထားတာပါနော် […]
အမျိုးသမီးတိုင်း သိထားသင့်ပြီး လုံးဝမပေါ့ဆသင့်တဲ့ သားအိမ်ကင်ဆာ လက္ခဏာများ
အမျိုးသမီးတိုင်း သိထားသင့်ပြီး လုံးဝမပေါ့ဆသင့်တဲ့ သားအိမ်ကင်ဆာ လက္ခဏာများ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဟာ အမျိုးသမီးတိုင်းမှာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါဟာ ဖြစ်ဖြစ်ချင်းကတည်းက အမြန်ဆုံးကုသမှုခံယူလိုက်ရင် အရှင်းပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေတော်တော်များများဟာ အခြေအနေဆိုးရွားလာတော့မှ ဂရုစိုက်တတ်ကြတာကြောင့် မသေဆုံးသင့်ဘဲ သေဆုံးနေရကြပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်ပြီး ဒီလက္ခဏာတွေဖြစ်ပြီဆိုရင် အမြန်ဆုံး ဆေးစစ်ဖို့လိုပါတယ်။ […]
၃ရက် အချိန်ပေးရုံဖြင့် ၁၂ ပေါင်ထိကျဖို့ စိတ်ကူးယဉ်ဖူးသလား
၃ရက် အချိန်ပေးရုံဖြင့် ၁၂ ပေါင်ထိကျဖို့ စိတ်ကူးယဉ်ဖူးသလား သုံးရက် ထဲ နဲ့ ၇ ပေါင် ကနေ ၁၂ လောက်ထိ ပိန်ချင်ပါသလား ??? side effect မရှိပဲ သဘာဝအတိုင်း အဆီကျ သွယ်လျစေဖို့ သင့်မှာ သည်းခံနိုင်စွမ်း ၃ ရက်ပဲ […]
Miss Universe Myanmar ပြိုင်ပွဲမှာ အလန်းစား Performance တွေနဲ့ ပွဲကျအောင် ဖျော်ဖြေနိုင်ခဲ့တဲ့ နေရွှေသွေးအောင်
Miss Universe Myanmar ပြိုင်ပွဲမှာ အလန်းစား Performance တွေနဲ့ ပွဲကျအောင် ဖျော်ဖြေနိုင်ခဲ့တဲ့ နေရွှေသွေးအောင် နေရွှေသွေးအောင်ကတော့ Cover Song တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို စိတ်ဝင်စားအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ သူတစ်ဦးပါ။ သူ့ရဲ့ အမိုက်စား၊ အလန်းစား Cover Song တွေက ကြည့်ရှုသူတွေကို […]
ဖောက်ပြန်တဲ့ မိန်းမကြောင့် အစ်ကိုရင်း က ညီအရင်းအား ဓါးနဲ့ လည်ပင်း ထိုးသတ်
ဖောက်ပြန်တဲ့ မိန်းမကြောင့် အစ်ကိုရင်း က ညီအရင်းအား ဓါးနဲ့ လည်ပင်း ထိုးသတ် မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့နယ်၊ ကော့သန်ကျေးရွာလယ်တဲအတွင်း လည်ပင်းတွင် ဓါးဖြစ်ထိုးသွင်းဒါဏ်ရာ ဖြင့် ညီဖြစ်သူသေဆုံးနေကြောင်း အစ်ကိုဖြစ်သူမှ တရားလိုပြုလုပ်၍ တိုင်တန်းမှုအား ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနာရီ(၄၀) အတွင်းစုံစမ်းဖေါ်ထုတ်ခဲ့ရာမှ သတ်သူမှာတရားလိုဖြစ်နေကြောင်း မေလ (၃၁) ရက်နေ့က သထုံမြို့မရဲစခန်းမှ […]